IEBC oo shaacin doonto magacyada shirkadihii ay sannadkii hore qandaraasyo siisay – The Voice of Northeastern Kenya
IEBC oo shaacin doonto magacyada shirkadihii ay sannadkii hore qandaraasyo siisay
Anwar Mohamed October 17, 2018
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC ayaa sheegay inuu soo bandhigi doono magacyada shirkadaha sannadkii hore qaatay qandaraasyo kala duwan oo ay qalab ugu wareejiyeen .
Sido kale waxaa la shaacinaya magacyada agaasimayaasha shirkadahaasi.
Prof. Cabdi Guliye oo ka mid ah sarakiisha sar sare ee IEBC ayaa carrabka ku dhuftay in howshaasi la sameynayo kadib amar madaxweyne oo 13-kii bishii lixaad ka soo baxay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan shaqada laga ceyriyay madaxii fulinta ee guddiga qaran ee doorashooyinka Mr. Ezra Chiloba oo lagu eedeyay inuusan u hoggaansamin shuruuc u degsan soo iibsashada qalabka.
Sido kale guddoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati ayaa warqad u qoray agaasimaha dacwad soo oogidda Nuurdiin Xaaji iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuuna labada dhinac ka codsaday inay baaritaano ku sameyaan fadeexad la sheegay in lacago lagu lunsaday xilligii doorashadii guud ee bishii sideedaad sannadii 2017-kii.
← Israa’iil oo duqeymo ka fulisay Qaza
Nemanja Matić oo shaki weyn la galinaayo inuu ciyaari doono kulanka Chelsea. →
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR 1.30PM 23/1/2019 January 23, 2019
Dacwad ay wajahayeen eedeysanayaal lala xariiriyay weerarkii Jaamacadda Garissa oo dib loo dhigay January 23, 2019
Saraakiisha guddiga EACC oo howlgalo ka sameeyay xafiiska barasaabka Wajeer January 23, 2019
Banaan baxyo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. January 23, 2019
xubin ka tirsan wasaarada arimaah gudaha Soomaaliya oo la dilay. January 23, 2019
Gudoomiyaha gobolka banaadir oo la kulmay Safiiirka Masar ee dalka Soomaaliya. January 23, 2019
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo cafis u fidiyay 13,000 oo maxaabiis ah January 23, 2019
Guddiga xoojinta midnimada oo maanta shir ku qabanaya ismaamulka Samburu January 23, 2019
Musalia Mudavadi oo ka hadlay shaqada loo dhiibay wasiirka arrimaha gudaha January 23, 2019
Madaxweynihii hore oo Soomaaliya oo sheegay in qanuun adag loo baahan yahay. January 23, 2019
DHAGEYSO WARKA DUHURNIMO EE IDAACADA STAR 1.30PM 23/1/2019
Dacwad ay wajahayeen eedeysanayaal lala xariiriyay weerarkii Jaamacadda Garissa oo dib loo dhigay
Saraakiisha guddiga EACC oo howlgalo ka sameeyay xafiiska barasaabka Wajeer
Banaan baxyo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.
xubin ka tirsan wasaarada arimaah gudaha Soomaaliya oo la dilay.
Gudoomiyaha gobolka banaadir oo la kulmay Safiiirka Masar ee dalka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo cafis u fidiyay 13,000 oo maxaabiis ah
Guddiga xoojinta midnimada oo maanta shir ku qabanaya ismaamulka Samburu
Musalia Mudavadi oo ka hadlay shaqada loo dhiibay wasiirka arrimaha gudaha
Madaxweynihii hore oo Soomaaliya oo sheegay in qanuun adag loo baahan yahay.